Warkii Radio Xoriyo : 22 Julay,2003
-Shir ay isugu yimaadeen Xubnaha Jaaliyada Norway
-Maxakamad ay Dawlada wayaanuhu saartay madax sar sare oo wax dambi ah lagu waayay
-Sadex Safiir oo Ethiopia ka Baxsaday
-Seyoum Mesfin oo loodiiday Lacag uu Bangiga Switzerland Dhigtay.
Shir si aada loo so Abaabulay oo ay ka soo qayb galeen Xubnaha Jaaliyada reer Ogadenia ee Norway ayaa ka dhacay Magaalada Oslo Taariikhdu markay ahayd, 19 Julay,2003. Shirkaas oo wax yaabo badan lagaga wada hadlay ayaa waxaa kamid ahaa.
1-Dardargalinta hawlaha Jaaliyada
2-Wadciga siyasadeed iyo midka nolaleed ee kajira Ogadenya,
3-Hor umarinta Halganka
4-Iyo Sii Xoojinta Xidhiidhka ka dhaxeeya Jaaliyada reer Ogadenya ee Norway iyo Jaaliyadaha kale.
Waxaa kale oo shirkan lagaga wada hadlay, sida bini aadminimada kabaxsan ee uu ula dhaqmo Gumaysiga Itoobiya shacabka reer Ogadenya, Gaar ahaan gabdhaha, Waxaana tusaale ahaan loosooqaatay Asli oo kamid ah Gabdha reer Ogadenya ee loogaystay xadgudka, oo ay kufsadeen CCGI ee kusugan gudaha Ogadenya hadana ku ildaran meel kamid ah Somalia, dhibka Asli kudhacay waxa uu kamidyahay dhibaatooyinka heesta dhamaan shacabka reer Ogadeniya. Waxaa shirka afkaartooda kadhiibtay ururka haweenka reer Ogadeniya ee Norway oo muujiyay hadafkoofda siyaasadeed iyo sida ay uga Go,antahay Xoriyad Gaadh siinta Shacabka reer Ogadenia. shirkaas oo ay ka soo baxeen Go,aamo wax ku ool ah kuwaas oo ahaa sidan
1-Kahortaga iskudirka gumaysigu ka dhaxwado shacabka reer Ogadenya.
2-Sii xoojinta Halganka Muqadaska ah ee ay majaraha u hayso JWXO iyo
3-In shacabka reer Ogadenya ee kunool Norway ay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan Halganka.
Waxaa sidoo kale Shirka lagu Canbaareeyay Gumaysata Itoobiya iyo falalka wax shinimada ah ee ay CCGI kula dhaqmaan shacabka Reer Ogadenia. ugu dambayntii shirku wuxuu ugu baaqay dhamaan shacabka reer Ogadenia in ay meel ooga soo wada jeedsadaan Gumaysiga Itobiya.
Wariyaha Radio Xoriyo uga soo Warama Adis-Ababa Qamaan Xirsi ayaa inoo soo sheegay Dad Jagooyin Sare ka hayn Jiray Itoobiya oo Maxkamad la saaray
Maxkamad siyaasi ah oo loo diyaariyay Dr. Cabdi Aadan oo horay u ahaa wasiir kuxigeenka wasaarada Caafimaadka, wasiirkii hore ee gaashandhiga Siye Abraha iyo walaashii Timinit oo mudo gaaban wasaarada Caafimaadka ka shaqayn jirtay, ayaa xukuntay in aynan dadkaasi wax danbi ah lahayn, hasayeeshee dad xog ogaal ah ayaa sheegaya in arintani ku lugleedahay arimo siyaasadeed, waxana la siidaayay Timinet Siye, Dr Cabdi Adana wax dambi ah waa lagu wayay, hasayeeshee waxayna maxakamadu diiday in la siidayo Siye Abraha oo ay maxkamadu sheegatay, in loo haysto danbiyo kale oo aan lacadaynin.
Warar aanu kahelay ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in ay baxasashada Diplomasiyiinta Ethiopianka ah ay aad usii kordhayaan baryahan danbe. Dad ku dhadhaw wasaarada arimaha dibada ayaa waxay sheegayaan in 3 safiir oo u kala fadhiyay wadamada Keniya, Koonfur Afrika iyo New York ay amar diido sameeyeen kadib markii lagu amray in ay wadanka soo galaan ilaa iyo hadana aan wax war ah laga helin, taas oo u muuqata in ay baxsadeen. Dhawaan mar uu wasiirka arimaha dibada ee Ethiopia Sayum masfin uu lahadlayay Barlamaanka ka, waxa u u sheegay in ay diplamaasiyiinta wadamada loo diray lagu soo xulay aqoon, hasayeeshee ay aad u yar yihiin inta ka soo baxda hawshii loo xil saaray , waxa kale oo uu intaa raaciyay in ay iloobeen wadninimadii oo ay ku mashquulsanyihiin dana shaqsiyadeed
Iyada ooy baryahanba Madaxda dawlada wayaanuhu u kala baratamayeen sidii ay hantida dadwaynaha u dhici lahaayeen, ayaa Warar aanu kahelay ilo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in uu Seyoum Mesfin dhigtay bagiga Switzerland lacag gaadhaysa 1 Milyan oo Dollar. Hasayeeshee kadib markii la,ogaaday ayuu raisul wasaare ku sheega Ethiopia amray in baadhis lagu smeeyo lacagtaas. Dadka arintan u dhuun duleela ayaa waxay sheegayaan in ay lacagtani taalay bangiga mudo kabadan 4 sano, waxaana lagu wareejiyay masuuliyada lacagtaas laba nin oo uu kalgii taliye Males soo magacaabay oo lakala yidhaahdo Gebre iyo Muligeta Alamsaged. Wararku waxay intaa kudarayaan in sadex kale oo saraakiil sar sare ah oo TPLFta katirsan ayagana koontadoodii laxidhay, sidoo lacagayow kale oo TPLFta utaalay Bangi laga leeyahay Sacuudiga ayaa hanti dhowr loo diray.
Dhagaysta yaal warkii oo aad kadhagay sanayseen Radio Xoriyo Codkii Shacabka Ogadenia Caawa waa naga intaas
Radio Xoriyo, 22 Julay,2003